uMadiba wamukela izivakashi ekhaya lakhe
uMandela wamukela izivakashi ekhayeni lakhe elikunamba 8115 Orlando West, ekhoneni lika Vilakazi no Ngakane Streets, eSoweto.
uNelson Mandela wayehlala emukela izivakasha ekhaya lakhe elisekhoneni lasemgwaqeni uNgakaze no Vilakazi eOrlando West, eSoweto. Lezi vakashi kwakungabangani, ozakwab emsebenzini, abalandeli be African National Congress (ANC), abaholi bezenkolo kanye nosopolitiki ayedlelana nabo. Kwakuthi uma uMandela ezohlangana nezicikuthwane, abezindaba babethutheleka emzini wakhe ukuzama ukuthwebula izithombe zemizuzu eyingqayizivele. uPeter Magubane wayengumngani nesihambeli esasivamile emzini kaMadiba futhi wayethwebula izithombe eziningi zakhe nezezivakashi zakhe.
uMadiba wayekuthanda ukuhlangana nabantu abajwayelekile abelane nabo izindaba zethemba, ukubekezela kanye nenkululeko. Osesithombeni ngemuva ngu Cyril Ramaphosa owaqokwa ukuba nguMongameli wase Ningizimu Afrika ngo February 2018. Basebenza ngandawonye njengabaholi be ANC besebenza ukungenisa iNingizimu Afrika ekukhanyeni okusha kentando yeningi.
“Uma ukuceba kungumazibuthe, ngakho ububha mabuqhele. Nokho kwabanye ubhubha bavamise ukuveza isipho sokupha." ~ Nelson Mandela